Tani waxay ahaan doontaa cimilada jasiiradaha Balearic sannadka 2038 | Saadaasha Shabakadda
In kasta oo ay aad u adag tahay in la ogaado sida cimiladu u dhaqmi doonto toban sano ama ka badan, maanta waxaan haynaa barnaamijyo ka caawin kara khubarada saadaasha hawada iyo kuwa jecel hawada inay fikrad ka helaan waxa dhici kara. Sidaa darteed, agaasimihii hore ee dhulalka ee Wakaaladda Saadaasha Hawada (AEMET) ee Jasiiradaha Balearic, Agustí Jansà, wuxuu awooday inuu Diario de Mallorca u sharraxo waxyaabo aad u walaacsan.
Sida laga soo xigtay khabiirka, haddii aan tallaabooyin adag horay loo qaadin, mustaqbalku wuxuu umuuqdaa mid cirro leh. Tani waa sida cimiladu noqon doonto Jasiiradaha Balearic sannadka 2038.
1 Saddex shahaado kor u kac
2 Heerka badda wuxuu kici doonaa 25 sentimitir
Saddex shahaado kor u kac
Waqtigan xaadirka ah, heerkulka celceliska meeraha ayaa kor u kacay illaa 1,4 darajo Celsius ilaa 1880. Waxay umuuqataa qiimo aan qiimo lahayn, laakiin waxay kufilan tahay inay jabiso diiwaanno muhiim ah sanad walba. Sidoo kale, jasiiradaha Balearic sanadka 2038 heerkulka wuxuu gaarayaa ilaa 3 darajo inta lagu jiro xagaaga. Jiilaalku wuxuu sii wadi doonaa inuu jilco, oo leh qiimayaal kor u kici kara illaa nus darajo sare. Marka dareenka ah "dhicitaan ma jiro" wuu sii kori doonaa kolba markii ay sii socoto.
Haddii aan ka hadalno heerkulka badda, inta lagu jiro xilliga xagaaga waxay noqon kartaa illaa heer ka sarreeya, taas oo saameyn ku yeelan doonta posidonia iyo, sidoo kale, xayawaanka.
Heerka badda wuxuu kici doonaa 25 sentimitir
25 sentimitir oo ay saadaalinayso inay mabda 'ahaan kor u kacdo ayaa laga yaabaa inaysan badnayn, laakiin haddii aan tixgelinno in isla caasimadda gobolka, Palma, ay ku dhowdahay heerka badda, waa la sii odorasayaa in xeebaha qaar ay saameyn doonto. Taasina ma aha in la xuso in marka wajiyo qabow soo dhowaadaan oo biyuhu kacaan, halista daadadku ay sii kordhi doonaan.
Haddii ay jiraan wax wax ku ool ah oo intaas oo dhan jira, waa intaas in si ku filan loo maal galiyay si ugu yaraan kala bar baabuurta wareegaya ay yihiin koronto, si aan u yeelano xoogaa jawi deggan.
Si aad u aqriso warka oo dhameystiran, riix halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » Tani waxay noqon doontaa cimilada jasiiradaha Balearic sannadka 2038
Wax kasta oo ka dhacaya dhulka waxa ugu wacan bani'aadamka halkii aan ka burburin lahayn degaankeenna waxaan u daryeeli lahayn sida ugu qaalisan ee aan haysanno, ha ku degdegin isbeddelka cimilada ee la soo dhaafay, taasi waa sababta aan u bilaabi karno daryeelka dhulkeenna iyada oo aan yareyn xaalufinta xoolaha si loo bakhtiiyo iwm